Myanmar Institute of Information Technology | MIIT
Results for the MIIT Entrance Examination 2021 have been declared. Click here for more details.
Myanmar Robotians Competition 2019
Myanmar Collegiate Programming Contest 2019
MIIT Entrance Examination 2019
Saya Gadaw Pwe (Homage Paying Ceremony) 2019
MIIT Fun Fair 2019
MIIT Cleaning Drive 2019
Khant Khine shares his experiences from SSEAYP 2019
Visit of Ambassador of India in Myanmar to MIIT
Phone Khant Kyaw shares his experiences from his visit to Japan as part of JENESYS 2018
Second Meeting of the MIIT Governing Council
Read what our students have to say about their exchange visit to Japan
Important notice regarding AY 2021-22
The 2021 MIIT Entrance Examination was conducted on November 20, 2021. Click on this link for the first list of candidates selected for admission to the Bachelor of Engineering (Honours) programme in Computer Science Engineering (CSE) for Academic Year 2021-22. Classes for AY 2021-22 for the new batch will begin on May 12, 2022.
Congratulations to all the successful candidates! You will be notified of the last date for accepting the admissions offer later. Please keep checking the website for any updates and do not trust information from any other source.
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော (MIIT) သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးဆိုင်ရာ ပဏာမ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့တွင်တည်ရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသားများအတွက် ပညာသင်ယူရန် အချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ MIIT သည် Computer Science & Engineering (CSE) နှင့် Electronics & Communication Engineering (ECE) ပရိုဂရမ်များကို လက်တွေ့ပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သင်ကြားပို့ချပေးသောကြောင့် ကျောင်းသားများအတွက် ပညာရေး အတွေ့အကြုံသစ်များရရှိရာနေရာဖြစ်သည်။
ASEAN-India Research Training Fellowship
Myanmar Robotians Competitions 2019
Myanmar STEM Competition 2019
Convocation Ceremony, 2022
02 Sep – 30 Aug 2020 at The Internet, Everywhere
Fri, 31 Jan 2020 at Room 302, MIIT, Mandalay
Effective Use of the MIIT LMS
Tue, 10 Dec 2019 at Room 201, MIIT, Mandalay
Sat, 06 Jul 2019 at MIIT, Mandalay
MIIT ၌ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းသည် လျှောက်ထားသူများ၏အရည်အချင်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။ တက်ရောက်ခွင့်အတွက် လျှောက်ထားသူ၏ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲရလဒ်နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲရမှတ်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ မဟာတန်းသို့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ပညာသင်နှစ် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်း ရရှိခဲ့သောရလဒ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
MIIT ၏ပညာရေးနည်းစနစ်သည် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော (IIIT-B) ၏ ပညာရေး ပရိုဂရမ်များကို ရယူထားသည်။ ဤနည်းစနစ်သည် ကျယ်ပြန့်သောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအပြင် လက်တွေ့ အသုံးချပညာရေးစနစ်နှင့် သင်္ချာဘာသာရပ်၊ သိပ္ပံဘာသာရပ်များ၊ အင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံဘာသာရပ်များ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်မှုစွမ်းရည်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့်ပညာရေးစနစ်ကို ဗဟိုပြုထားသည်။
Copyright © 2022 Myanmar Institute of Information Technology.